? => C2H2 (acetylene) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = C2H2 | Isu dheellitirka Kiimikada
? = acetylene
Natiijooyinka 16 helay
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CH4 . C2H2 + 2H2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH4 (methane)?
Heerkulka: 1500 ° C Xaaladda Kale: qaboojinta degdegga ah
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H2 (acetylene) iyo H2 (hydrogen)?
Burburka methane heerkulka sare
Dhacdada ka dib CH4 (methane)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH4 (methane), oo la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CH4 . C2H2 + 2H2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C2H2 (acetylene)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H2 (methane)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (methane)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca (OH)2
kaalshiyamka carbide biyaha acetylene kaalshiyamka hydroxide
(rnn) (lng) (kh) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca (OH)2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CaC2 (calcium carbide) waxay kaga falcelisaa H2O (biyaha)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H2 (acetylene) iyo Ca (OH)2 (calcium hydroxide)?
Dhacdada ka dib CaC2 (calcium carbide) waxay la falgashaa H2O (biyaha)
Shaybaarka iyo warshadaha, acetylene waxaa lagu soo saaraa iyadoo loo daayo kaalshiyamka kaalshiyamka inuu biyo ku falgalo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikaad ee CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca (OH)2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CaC2 (kaalshiyam carbide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CaC2 (calcium carbide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaC2 (calcium carbide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H2 (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) badeecad ahaan?
CaC2 + H2SO4 → C2H2 + Kiis4
kaalshiyamka carbide acid sulfuric acetylene macdanta kaalshiyamka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CaC2 + H2SO4 . C2H2 + Kiis4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CaC2 (kaalshiyam carbide) oo la falgala H2SO4 (sulfuric acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H2 (acetylene) iyo CaSO4 (calcium sulfate)?
Dhacdada ka dib CaC2 (calcium carbide) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikaad ee CaC2 + H2SO4 . C2H2 + Kiis4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H2 (sulfuric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CaSO4 (calcium sulfate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CaSO4 (sulfuric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaSO4 (calcium sulfate) badeecad ahaan?
CH3CH = CHCH3 → C2H2 + C2H6
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3CH = CHCH3 . C2H2 + C2H6
Waa maxay xaalada falcelinta CH3CH=CHCH3 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H2 (acetylene) iyo C2H6 (ethane)?
Dhacdo ka dib CH3CH=CHCH3 ()
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga C2H6 (ethane), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda C4H8, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3CH = CHCH3 . C2H2 + C2H6
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3CH=CHCH3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CH=CHCH3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CH=CHCH3 () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C2H6 (ethane)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H6 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H6 (ethane) alaab ahaan?
2C + H2 → C2H2
kaarboonka hydrogen acetylene
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2C + H2 . C2H2
Waa maxay xaaladda falcelinta C (kaarboon) ee uu la falgalo H2 (hydrogen)?
Heerkulka: 1500 - 2000 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C2H2 (acetylene)?
Dhacdada ka dib C (kaarboon) waxay la falgashaa H2 (hydrogen)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga C2H2 (acetylene), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2C + H2 . C2H2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C2H2 (hydrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) badeecad ahaan?